Akụkọ - OLED ngosi ọkwọ ụgbọ ala IC (DDI) nwere ike ịkasi ike n'afọ na-abịa, na-emetụta mbupu ekwentị mkpanaaka
OLED ngosi ọkwọ ụgbọ ala IC (DDI) nwere ike ịkasi ike n'afọ na-abịa, na-emetụta mbupu ekwentị mkpanaaka
Dabere na isi mmalite ụlọ ọrụ, OLED ngosi onye ọkwọ ụgbọ ala IC nwere ike ịkasi ike na 2022, nke ga-emetụta mbupu ekwentị.
Dị ka akụkọ Digitimes si kwuo, isi mmalite kwuru na ndị na-ebubata DDI na Taiwan, dị ka Novatek, Himax, Tuntai, na Ruiding, na-ewusi mmepe na mmepụta nke OLED DDI ike, na-atụ anya ịbawanye ọnụego mbupu nke ibe ndị dị otú ahụ na 2022. , A na-atụ anya na a ga-anabata ihuenyo OLED na ekwentị ọhụrụ.
Nyocha Digitimes na-ebu amụma na mbupu panel ekwentị OLED zuru ụwa ọnụ ga-eru nde 713 na 2022, mana mbupu OLED DDI ga-abụ naanị nde 650-660, o doro anya na ọ dị ụkọ.
Na mgbakwunye, isi mmalite kwuru na ụkọ OLED DDI maka ekwentị mkpanaaka na 2022 ga-adabere na nsonaazụ ahịa nke ekwentị ọnụ. Agbanyeghị, ka ọnụ ọgụgụ ntinye nke smartphones OLED na-arị elu n'afọ ole na ole sochirinụ, a na-atụ anya ụkọ ogologo oge ịgbasa.
Aghọtara na ọtụtụ OLED DDI ka arụpụtara ugbu a na 12-inch wafer fabs site na iji usoro 40nm, na ndị na-emepụta mgbawa na-achọsi ike nkwado site na ndị mmekọ ntọala. "Novatek na-eme ka mmekorita ya na UMC na Samsung sikwuo ike. Himax, Duntech na Ruiding na-asọ mpi maka ikike nchọta karịa site n'aka ndị mmekọ ha, ebe ha na-eme OLED DDI ibe kacha mkpa maka iji ikike eme ihe, "isi iyi ahụ kwuru.
Dị ka 12-inch fab ga-ewepụta ọtụtụ ikike 28/22nm ọzọ na 2023, ụfọdụ ndị na-ahụ maka ụlọ ọrụ kwenyere na ndị na-emepụta DDI nwere ike ịgbanwe site na 40nm gaa na mmepụta 28/22nm iji mee ka nnweta nke OLED DDI dị mfe. Mana ụfọdụ ndị kwenyere na ọtụtụ ngwa ndị ọzọ ga-adabere na ikike ọhụrụ, nke ga-eduga asọmpi kpụ ọkụ n'ọnụ n'etiti ndị na-emepụta mgbawa.
Achọrọ ịmụtakwu, tinye wechat:
Oge nzipu: Nov-27-2021